Maamulka degmada Gaalkacyo oo sheegay inuu wax ka qabanayo biyaha magaalada dhex fadhiya ee roobku uu keenay. – Radio Daljir
Oktoobar 18, 2012 5:38 b 0
Gaalkacyo, Oct 18- Xilli cabasho ballaaran ay ka so yeerayaan bulshada magaaladda Gaalkacyo gaar ahaan ardayda wax ka barata goobaha waxbarashada ee ay saameeyeen biyaha dhex fadhiya dariiqyadii ay goobahooda u mari lahaayeen ayaa duqa degmada Gaalkacyo Col ; Siciid Cabdi Faarax wuxuu sheegay inay wadaan qorshayaal macquula oo ay wax kaga qabanayaan biyaha dhex fadhiya magaaladda.
Siciid Cabdi Faarax duqa Gaalkacyo ayaa sheegay inay maalmihii danbe soo gaarayeen cabashooyin fara badan oo ku aadan xal u raadinta iyo wax ka qabashada biyaha magaaladda dhex fadhiya oo hada midab doorsoomay maadaamaa toddobaadyo dhex fadhiyaan meelaha biyo qabatinkaa iyo waddooyinka qaarkood.
Duqa ayaa tilmaamay in dhawaan ay xiri doonaan goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarashada si loo qaado oloole baaxad leh oo magaaladda lagaga qaadaya biyaha dhex fadhiya, Duqa ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in ay jiraan goobo waxbarasho oo u xiran biyaha dhex fadhiya aawadood.
Roobabkii dhawaan ka da’ay magaaladda Gaalkacyo ayaa biyo badan dhigay gudaha magaaladda taasoo sababtay inay xirmaan jidadka qaar, sidoo kalana laga cabsi qabo inay ka dhashaan xanuuno, dhanka kale bara-kacayaasha magaaladda ku nool ayaa qaylo dhaan u diray maamulka iyo Hay’adaha iyagoo qaarkood sheegay inay dhismayaashii ka samaysnaa cooshadaha ay bur-buriyeen biyaha, haddii aan si deg-dega wax loola soo gaarina ay ka dhalan karaan dhibaato bani’aadantinimo oo aad u daran.
Diiwaanka Wararka Gaalkacyo